Ny lalao Nintendo efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Lalao Android
Nintendo dia iray amin'ireo orinasa filalaovana malaza Manerantany. Tompon'andraikitra amin'ny andiany malaza indrindra eran-tany izy ireo. Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia namoaka ny lalao ho an'ny telefaona Android ihany koa izy ireo. Zavatra toa manome vokatra tsara, satria lalao vaovao no ambara ho amin'ny ho avy. Noho izany, etsy ambany, avelanay ianao hisafidy ireo lalao tsara indrindra ananan'izy ireo amin'ny Android ankehitriny.
Araka ny efa nataontsika tamin'ny anarana hafa toa Gameloft, EA, Ubisoft, Warner Bros y Noodlecake Studios, manao toy izany koa isika amin'ny fisafidianana ny lalao Nintendo ho an'ny Android. Safidy fohy, saingy misy lohateny mahaliana an'ireo mpampiasa. Tsarovy fa manana vitsivitsy isika Nintendo DS emulator ho an'ny Android, izay ahafahantsika miditra amin'ny lalao an'arivony avy hatrany koa.
2 Dragalia Very
4 Fiampitana biby: tobin'ny paosy
Mety ny lalao fanta-daza indrindra izay ananan'i Nintendo ao amin'ny Play Store ankehitriny. Ity dia lalao mampiala voly, izay ahitantsika singa marobe avy amin'ny Super Mario saga. Ka lasa safidy mahafinaritra io. Ny sary manampy be dia be amin'ny fanaovana azy ho lalao mampiala voly. Tsy maintsy asongadintsika tsara ihany koa ny lalao amin'ny lalao, satria tena mora ny milalao, azontsika atao amin'ny tanana iray fotsiny io raha ny marina. Zavatra manampy betsaka azy io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Ao anatiny no ahitantsika ny fividianana. Raha ny tenany manokana dia tsy zavatra ratsy izany, fa ny olana dia ny fanararaotan'ity orinasa ity ity rafitra ity, ary farany mangataka fividianana ny zavatra rehetra izy ireo, izay mandreraka ny mpampiasa, araka ny efa nolazain'i Francisco taminao amin'ny famakafakany ny lalao.
Ny lalao vao haingana indrindra tonga amin'ny Android avy amin'ny Nintendo, navoaka tamin'ny faran'ny volana septambra, tahaka ny efa nangoninay tamin'ny androny. Raha izany dia, manova ny miralenta amin'ny fomba miavaka isika ary mankany amin'ny RPG. Lalao izay misongadina amin'ny ady nataony, feno hetsika sy dinamisme, izay mahatonga ny lalao ho fialamboly amin'ny fotoana rehetra. Ny kalitaon'ireo sary dia mitoetra mifanaraka amin'ny antenain'ny olona amin'ny studio. Tsy maintsy asongadinay koa ny feon-kira, izay iray amin'ireo singa sarobidy indrindra amin'ny mpampiasa maro.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Soa ihany fa tsy sahala amin'ny tranga teo aloha fa tsy manararaotra an'ity paikady ity izy ireo. Azonao atao ny milalao nefa tsy mila mandoa na inona na inona amin'ny lalao.
Iray amin'ireo lalao Nintendo manan-danja indrindra ao amin'ny Play Store. Mijanona ao anatin'ny karazana RPG amin'ity lohateny ity izahay, iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny marika. Satria an'ny iray amin'ireo sagas RPG malaza eran-tany izy io. Ny fahombiazany dia voatazona amin'ny fitaovana Android, miaraka amin'ny naoty tsara nataon'ny mpampiasa ao amin'ny Play Store. Misongadina amin'ny sary mahafinaritra, ny ady mahavariana, ny safidy hanamboarana ny maherifonao, noho ny fitaovam-piadiana sy ny zavatra. Ary koa, rehefa miakatra izy ireo dia hihatsara ny fahaizany, noho izany dia manana safidy bebe kokoa amin'ny ady ianao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, ny Nintendo dia miloka amin'ny fividianana ao anatiny. Misaotra azy ireo fa afaka mihazakazaka haingana ianao, saingy tsy voatery.
Lalao Nintendo natao kokoa ho an'ny ankizy kely, saingy lalao malaza be ao amin'ny Play Store. Raha izany dia, voatendry ianao hitantana sy hiambina kianja filasiana. Tsy maintsy ho azonao antoka fa milamina ao aminy ny zava-drehetra, ankoatry ny fanaingoana azy amin'ny fomba izay hahatonga ny mpitsidika maniry ny hipetraka ao. Lalao tsotra, mampiala voly nefa milamina. Izany no antony safidy tsara ho an'ny faralahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Nintendo tsara indrindra ho an'ny Android
Nipoitra ny sarin'ny Honor 8A: ny farany ambany manaraka eny an-dalana